ရင့်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ လျစ်လျူမရှုသင့်သော ဝေဒနာလက္ခဏာတစ်ရပ် - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ရင့်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ လျစ်လျူမရှုသင့်သော ဝေဒနာလက္ခဏာတစ်ရပ်
နိုဝင်ဘာ 30, 2018 Supachai Nildum, M.D.
ရင်ဘတ်အောင့်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှလုံးအောင့်ခြင်း (သို့) နှလုံးကြွက်သားမှာ သွေးလည်ပတ်မှုမရလို့ကြွက်သားပုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်နေတာဆိုရင်တော့ သိပ်ကို အန္တရာယ်ရှိလှပါတယ်။
တကယ်လို့များ မိနစ် ၂၀ လောက်အထိ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း ခံစားရလာရင် နှလုံးကြွက်သားပျက်စီးခြင်း နဲ့ဆိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးရှိနိုင်တာ မို့ လျင်မြန်စွာ စစ်ဆေးကုသမှုမျိုး ပြုဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
တကယ်လို့များ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ ရင်ဘတ်အောင့်တယ်လို့ခံစားနေရရင် အဓိကစဉ်းစားရမှာက နှလုံးသွေးကြော အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းဟာ နှလုံးပြဿနာကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီး ဆေးရုံသို့ လျင်မြန်စွာ ပို့ဆောင်မှုပြုဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ လူဘယ်နှစ်ယောက်က တွေးထင်မိပါသလဲ? ဆိုကြပါစို့လူငယ်လေးတစ်ယောက်က လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေတဲ့ အချိန် ရင်ဘတ်အောင့်တယ်လို ပြောရင်? သို့မဟုတ် မိဘတွေနဲ့စိတ်ဆိုးစကားများပြီးနောက် ရင်ဘတ်ကအောင့်တယ်လို့ ပြောလာတဲ့အခါ? ဒီလိုလက္ခဏာများက နှလုံးပြဿနာများလား? ဒီလိုရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းခံစားလာရပါက သူတို့ကို အရေးပေါ်ဌာနသို့ အလျင်အမြန်ပို့ဆောင်သင့်ပါသလား?
နှလုံးသွေးကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ လက္ခဏာအခြေအနေများကို ကျွန်တော်တို့သိထားပါက ဒီလိုအရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာရသောသူများကို ထိရောက်တဲ့ဆေးကုသမှုမျိုးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်အောင့်ရခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေအ ကြောင်းအရင်းများ
ရင်ဘတ်အောင့်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်အန္တရာယ်အထိစိုးရိမ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများမှာ နှလုံးအောင့်ခြင်း (သို့) နှလုံးကြွက်သားများပျက်စီးခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာရပ်များဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါလက္ခဏာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်တွင် တင်းကျပ်မှုမျိုးခံစားရကာ ရင်ဘတ်အလယ်သို့တစ်ခုခုဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် တွန်းလိုက်သကဲ့သို့ခံစားရခြင်း ။
အခြားနေရာများတွင်လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်ခံစာရခြင်း။ ဥပမာ – ပခုံး ၊ လက်မောင်း (သို့) မေးရိုး တွင်
တစ်ဘက်တည်းဖြစ် သို့မဟုတ် နှစ်ဘက်စလုံးဖြစ်စေ နာကျင်ဝေဒနာခံစားရခြင်း။
အချို့သောလူနားများသည် ရင်ဘတ်၌ဆိုးရွားစွာ နာကျင်မှုမခံစားရသော်လည်း သူတို့၏ရင်ညွှန့် ရိုးအောက်တွင် ဓါးဖြင့်ထိုးခံရသကဲ့သို့နာကျင်မှုမျိုးဖြစ်ပြီး ထိုသူ၌ မည်သည့်အစာအိမ် ပြဿနာမျိုး မရှိဖူးခဲ့သူ။
ခွန်အားအသုံးပြုရာတွင် ဥပမာ မတ်တပ်ရပ်ခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် နာကျင်မှုမျိုးသည် ပို၍ဆိုးလာပြီး ပြန်၍ထိုင်လိုက်ပါက တဖြေးဖြေး နာကျင်မှု ပြန်လျော့သွားစေခြင်းမျိုး။
လူနာတွင် ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံး အလွန်အမင်း ချွေးထွက်ခြင်း ကြုံတွေ့ရခြင်းမျိုး။
လူနာတွင် ပျို့အန်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်ုနှုန်းမြန်ခြင်းနှင့် အသက်ရှုမရခြင်းများကို ထိုင်နေ စဉ်တွင်ဖြစ်ပြီး ပြန်ထချိန်တွင် နဂိုကာလာထက် ပို၍ခက်ခဲခြင်းမျိုး။
ဒါကြောင့် ထိုကဲ့သို့သော် အခြေအနေမျိုး မိနစ် ၂၀ ထက်ကြာမြင့်ခဲ့သော်၊ နှလုံးရောဂါအခြေအနေမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဝေဒနာလက္ခဏာမျိုးခံစားရလာရင် အမြန်ဆုံး ဆေးကုသမှုအခြေအနေမျိုးပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
(၁) အဆုတ်အမြေးဖုံး၌လေဝင်ခြင်း(Pneumothorax): လူနာတစ်ဦးမှာ ၎င်းကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့နေရရင် ရင်ဘတ်တစ်ခြမ်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ခြမ်းဖြစ်စေ အလွန်တင်းကျပ်မှုမျိုးကို သိသာထင်ရှားစွာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော လက္ခဏာမှာ အသက်ရှူသည့် ပမာဏထုထည် ကျဆင်းလာပြီး အချိန်နှင့်အမျှပို၍ ဆိုးလာစေ နိုင်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ သော အခြေအနေမျိုးမှာ မဆိုင်းမတွဘဲ ဆေးကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤ အခြေအနေမှတဆင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်ယွင်းစေနိုင်ခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါ နိုင်ပါတယ်။
(၂) GERD (gastroesophageal reflux disease): ၎င်းကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့နေရရင် ရင်ညွှန့်ရိုး၏ အောက်ခြေမှ ရင်ဘတ်အလည်ထိ ပူလောင်သော ခံစားချက်မျိုးဖြစ်တယ်။ ထိုကဲ့သို ခံစားရသော တချို့လူနာတွင် လည်မျို၌ ပူလောင်ခြင်းမျိုး ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ။ အစာစားပြီးပြီးခြင်း လှဲအိပ်ခြင်းနှင့် တခါတည်းအစာ အများကြီးပြည့်အောင် စားသုံးခြင်းတို့သည် ထိုသို့သော လက္ခဏာများကို ပိုဆိုးစေပြီး အသက်ရှူမ၀ဖြစ် စေတတ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဤကဲ့သို့သော ဝေဒနာများသည် လမ်းအနည်းငယ်လျှောက်ရုံဖြင့် သက်သာသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့သော လက္ခဏာများသည် သင့်တော်သော သောက်ဆေးသောက် ပေးပါက လျင်မြန်စွာ သက်သာပျောက်ကင်းသွားစေနိုင်သည်။ (GERD) သည် အသက်အန္တ ရယ် စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေမျိုး မဟုတ်သော်လည်း နှလုံး (Heart Attack)၏ လက္ခဏာနှင့် အလွန်ဆင် တူသောကြောင့် ဆရာဝန်နှင့်တွေ့ပြီး ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် သင့်တော်သော ကုသမှုများ စီစဉ်သင့်ပါတယ်။
(၃) Costochondritis: ၎င်းကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုး၌လည်း ရင်ဘတ်အောင့်သည့် ဝေဒနာမျိုး ရင်ဘတ် ၏ ဘယ်ဘက်ဖြစ်စေ၌ညာဘက် ၌ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဤလက္ခဏာတွင် ရင်ဘတ်သို့ အချွန် ဖြင့်ထိုးသည့် နာကျင်မှုမျိုးရှိတက်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ ခံစားရလျှင် ကိုယ်ခန္ဓာအနေအထားပြောင်းလိုက်လျှင် နာကျင်မှုသည် မည်သည့်နေရာမှ လာသည်ကို ထင်ရှားစွာ သိနိုင်ပါတယ်။အချို့လူနာများသည် အသက် ရှူလိုက်လျှင် ရင်ဘတ်မှ နံရိုးအုံ၏လှုပ်ရှားမှုကြောင့် အလွန်နာကျင်မှုမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ပြန်၍ထိုင် လိုက်လျှင် ဝေဒနာပြန်၍သက်သာသွားပြန်ပါတယ်။ ထိုသို့သော လက္ခဏာမှာ ၅ မိနစ်မှ မိနစ်အနည်းငယ် သာ ကြာမြင့်တတ်၍ ဆေးကုသရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဝေဒနာမှာ မိနစ် ၂၀ တိုင်အောင် မသက် သာလာပါက ဆရာဝန်နှင့် ရောဂါကို သိရှိစေရန် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
(၄) Pulmonary embolism: (အဆုတ်တွင် သွေးခဲမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း) ၎င်းကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးကို (economic class syndrome) ဟူ၍ သုံးနှုန်းတတ်ကြပါတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူများတွင် ခရီးတစ်နေရာမှ အခြားတစ်နေရာသို့ သွားလာရာတွင် တစ်ရာရီထက် ကြာမြင့်စွာ သွားလာရခြင်းကြောင့် ထိုအခြေအနေမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကြောင့်လည်း အဆုတ်၌သွေးခဲ သောအခြေအနေမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်နိုင်စေပါတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်ရသည်မှာ သွေးကိုခဲသွားစေခြင်းနှင့် ခြေထောက် တွင် သွေးခဲမှုမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီးနောက် သွေးလည်ပတ်မှု ပို့ဆောင်သည့်အတိုင်း အဆုတ်သို့ ရောက်ရှိ စေပြီး လူနာ၌ မောပန်းမှုကို ဖြစ်လာစေပါတယ်။ ထို့နောက် ( Heart Attack ) နှင့် ဝေဒနာခြင်းဆင်တူ သော အသက်ရှူကြပ်ခြင်းနှင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းမျိုး ခံစားရပါတယ်။သို့သော်လည်း ဤကဲ့သို့သော နာကျင်မှုသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အခြားနေရာများသို့ မရောက်ခင်ပင်တချို့သော ဆိုးဝါးသောအခြေအနေများတွင်မူ အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။
(၅) Hyperventilation syndrome: (အဆုတ်ထဲသို့အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ် ပြင်းထန်မြန်ဆန်သော ပြဿနာ) အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ် ပြင်းထန်ခြင်းမျိုးသည် လူနာတစ်ဦး၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဆက်သွယ်မှုရှိပြီး ထိုလူနာ၏ အသက် ရှူသွင်းမှု အနေအထားတည်ငြိမ်စွာမရှိတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။လူနာ၏အသက်ရှူနှုန်း မြန်လာလျှင် သွေးထဲ တွင် အက်စစ်ဓာတ်များ ပုံမမှန်ဖြစ် စေကာ ရင်ဘတ်တွင်တင်းကျပ်လာခြင်း၊ အသက်ရှူကြပ်ခြင်း၊ ကြွက်သားများ ကြုံ့ တွလာခြင်း (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ခန္ဓာတကိုယ်လုံးအနှံ့ ထုံ ကျင်လာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဤကဲ့သို့ သောလူနာသည် ထိုလက္ခဏာဝေဒနာများဖြစ်လာသောကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အသက်ရှူ ပုံမှန်ဖြစ်လာစေ ရန် အသက်ရှူ ခြင်းအကြိမ်အရေအတွက် မြှင့်လိုက်ခြင်းက ထိုအခြေအနေကို ပိုဆိုးစေပါသည်။ ထိုအခြေအနေ မျိုးကို ဆယ်ကျော်သက်များ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ဖိအားများကြုံတွေ့ရသော အခြေအနေမျိုးတွင် ပို၍တွေ့ရပါ တယ်။ ရှေ့ဦးပြုစုနည်းလမ်းများအရ ထိုသူကို ကြမ်းပြင်၌ လဲလျောင်းစေပြီး၊ စိတ်လျှော့စေခြင်း၊ အသက်ရှူ နည်းကို ပုံမှန်ရှူသွင်းမှု ပြုလုပ်စေရန် အကြံပြုရပါမယ်။ဤခံစားရသော လက္ခဏာမှာ ၅ မိနစ်မှ ၁ဝမိနစ်အ တွင်း ဤအကြံပြုချက်အတိုင်း ပြုလုပ်လျှင် လျင်မြန်စွာ လျှော့သွားပါမယ်။ သို့သော်လည်း ဤသို့ဆောင် ရွက်မှု ပြုလုပ်ပြီး လူနာ၌ ဝေဒနာ မသက်သာခဲ့သော် ဆေးရုံသို့ သင့်တော်သော ဆေးစစ်ကုသမှုများ ခံယူရန် ပို့ဆောင်သင့်ပါတယ်။
ရင့်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ လျစ်လျူမရှုသင့်သော ဝေဒနာလက္ခဏာတစ်ရပ် အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သူ၏ရင်ဘတ်အောင့်သည်ဟု ဆိုခဲ့သော် ပထမဦးစွာ တွေးတောရ မည့်အချက်မှာ နှလုံးသွေးကြောအခြေအနေပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း လူဦးရေ မည်မျှလောက် ၌ ထိုသို့သော ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းမျိုးသည် နှလုံးပြဿနာနှင့်သက်ဆိုင်၍